Ahuike – Igbo Services
Gọọmenti Naijiria kwuru na obodo a ga-abụ ebe ndị njem nlegharị anya…
Afrika Agum Akwuwo Azum Ahia Egwuriegwu Ihe Emereme Mba Uwa Naijiria
Onyeisi Ivorian National Assembly Soumahoro anwụọla
Onyeisi ụlọ nzụkọ omiwu mba Ivori-Coast bụ,Amadou Soumahoro anwụọla n’ụbọchi Satọọde dika ogbara afo iri isii na asatọ. Onye ere ka amata nkea bu onyeisiala mba Ivoria-Coast bu, Prezidenti, Alassane Ouattara. Amadou Soumahoro bụ onye…
Arthur Nzeribe alaala mmụọ n’afọ iri asatọ na atọ
Otu onye ezinụlọ ya kwuru na nke a mere eme n'ezie. Dịka o si kwuo, Arthur Nzeribe nwụrụ n'ụlọọgwụ dị n'ala bekee. Ezinụlọ Nzeribe mechara wepụta akwụkwọ ozi nke ha ji kwuo kpọmkwem na nna ha ukwu alaala mmụọ n'eziokwu. Ha dere…
Ọrịa ahụ mmadụ nwerike ibute ma ha na anụmanụ nwee aramara.
Chigo	 May 8, 2022 0
Akpụkpa (Rabbies na bekee) Akpụkpa bụ ọrịa mmadụ nwerike ibute maọbụrụ na ya na nkịta nwee aramara. Ụkwara nta (Tuberclosis n'olu bekee) Ụkwara nta nke bekee kpọrọ Tuberclosis bụkwa ọrịa ọzọ ị nwerike ịnweta ma gị na anụmanụ nwee…
NDLEA achọpụtala ọgwụike ọnụ ahia ya ruru N22bn
CHIDI IGWE	 May 3, 2022 0
Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA n’aha ichafu,emela ka amata na dika ha n’enyocha onye mgbere ọgwụike bụ,Chief Afam Mallinson Ukatu,na ha chọpụtara contena abụọ nke ọgwụ Tramadol bụ nke ọnụ ahia ya ruru njeri naira iri…
Mmadu iri ise na asato ebutala oria COVID-19 na Shanghai
Shanghai nke mba China achoputala mmadu iri ise na asato ohuru butere oria COVID-19 cases,ebe akana enyocha otutu mmadu na Beijing ka odi ugbua.
Naijiria, mba ụwa, ndị ọzọ na-ekwe nkwa ịkwụsị FGM.
Chigo	 Apr 28, 2022 0
Gọọmenti Naijiria, mba ụwa, ndị isi ihe metụtara na otu ndị na-abụghị ndị gọọmentị agbaala mbọ ịkwụsị ibi ụmụ nwanyị ugwu na Naijiria. Emere nke a na "Mwepụta nke Movement For Good to End Genital Genital Women," na Abuja. …
Prezidenti Buhari eruola uju maka ọnwụ Kibaki ￼
CHIDI IGWE	 Apr 25, 2022 0
Onyeisiala bu Muhammadu Buhari ekwuputala obi nwute ya banyere onwu Mazi.Mwai Kibaki bu onye jibu okwa dika onyeisiala mba Kenya,ma kasie goomentina ndi mba Kenya maka onwu Mazi. Mwai Kibaki bu onye nwuru n’ubochi Satoode. Dika Buhari…
Ihe ndị dị n’ụlọ nwere ike ibutere ezinaụlọ nsogbu ahụike
Dịka Dkta Okon Akiba kọwara ya, 'domestic hazards' bụ "ihe ọbụla nwereike imerụ mmadụ ahụ n'ụlọ". Lee ụfọdụ n'ime ha nakwa ihe ndị dọkịta ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa gburugburu na ụlọọrụ nke Bekee kpọrọ 'Occupational and…
Ihe nwere ike ibutere gi ọrịa akiri (kidney)
CHIDI IGWE	 Apr 18, 2022 0
Ọtụtụ ndị ama ama anwụọla, ebe ụfọdụ ndị ọzọ gunyere onye otiegwu ụka na-ewu ewu nwụrụ na nso nso a site n'ọrịa akịrị. Dịka ndị ọkacharmara ahụike akịrị (neprologists) si kọwaa, ihe ruru nde mmadụ iri abụọ na ise (25m) na Naijria nwere…